यसरी चिन्नुहोस् यस्ता देखिन्छ’ दैनिक शा’रीरिक स’म्पर्क रा’क्ने म’हिला’हरुको हा’उभा’उ’ – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनयसरी चिन्नुहोस् यस्ता देखिन्छ’ दैनिक शा’रीरिक स’म्पर्क रा’क्ने म’हिला’हरुको हा’उभा’उ’
यसरी चिन्नुहोस् यस्ता देखिन्छ’ दैनिक शा’रीरिक स’म्पर्क रा’क्ने म’हिला’हरुको हा’उभा’उ’
February 8, 2021 admin मनोरंजन 16861
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन ****गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ ।
आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? ***उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा नै यहि हो, हेर्नुस यस्तो छ कारण शरीरका यी अंगहरुमा पटक पटक हात लगाउने बानी छ भने छोड्नुहोस । धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ । के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूप मा परिवर्तन आउँछ त ? यो कुरा यहाँ भनिनेछ । एक सर्वेले यसको बारेमा पत्ता लगाएको छ ।एक अध्यनका अनुसार महिलाहरूमा आउने परिवर्तनको कारण खुल्न आएको छ र यो सुनेर तपाइँको होश उड्छ । यो सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले गरेका थिए । ***यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ’न सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि ****जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो
पोइला जाने श्रीमतीलाई नुन खुर्सानी चौकीमै भयो यस्तो लफडा ,यस्तोअवस्थामा भेटे पछि लगे प्रहरी चौकी हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
November 21, 2020 admin मनोरंजन 7328
November 25, 2020 admin मनोरंजन 7581
काठमाडौं । महिलाहरु सबैकुरा सहन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमानलाई बाँड्न सक्दैनन् भन्ने भनाई छ । त्यस्तै पुरुषलाई पनि हुन्छ । आफ्नो प्रेमीका वा श्रीमती अन्य ब्यक्तिसंग नजिक भएको कसैलाई मन पर्दैन । तर यहाँ प्रस्तुत
December 18, 2020 admin मनोरंजन 11458
कहिल्यै नभेटका र नदेखेकाहरु फेसबुकमार्फत सहजै साथी बन्छन् ।कतिको घरबार बिग्रिएको छ भने कतिले बिहेबारी समेत यही फेसबुकले गराइदिएको छ । कुरू केहि समय अगाडिको हो चीनमा यस्तै भएको छ । कहिल्यै नभेटेका र नदेखेका
LEX 18 agenda conversation: Job club (541120)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511643)
Hello world! (433311)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395870)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131038)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104020)